तपाईंको कम्पनी ब्लग यदि तपाईंको जीवन यो मा निर्भर गर्दछ? | Martech Zone
तपाईंको कम्पनी ब्लग यदि तपाईंको जीवन यो मा निर्भर गर्दछ?
बिहीबार, मार्च ० 15, २०२० शुक्रबार, डिसेम्बर 15, 2017 Douglas Karr
त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जुन लाग्छ कि ब्लगरहरू हाम्रो तहखानेमा पिज्जा र माउन्टेन ड्यूको जताततै खुला बक्सहरूको साथ शिकार भएका छन्। त्यहाँ ब्लगरहरूको अर्को दृश्य छ जुन तपाईलाई सचेत नहुन सक्छ। ब्लगरहरू सामाजिक व्यक्तिहरू हुन् जसले सञ्चारको लालसा गर्छन् (र कहिलेकाँही ध्यान!)।
आज, मैले केही मान्छेहरूसँग भेटेर राम्रो बिहान भेट्टाए तीव्र दिमाग। मसँग समूहको साथ ब्लगिंगमा आफ्ना अनुभवहरू छलफल गर्ने अवसर पाएँ र कर्पोरेट ब्लगि strate रणनीतिहरूमा केही अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्ने मौका थियो। व्याख्यान धेरै राम्रोसँग स्वीकार गरियो र मैले यसलाई अत्यन्तै रमाईलो गरें।
यस व्याख्यानमा मनमोहक कुरा के हो भने यो सबै ब्लगिंगबाट भयो। बॉल स्टेट युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्ट हेड प्रोफेसरदेखि निर्माण कारखानाका आईटी प्रतिनिधिसम्म उपस्थित व्यक्तिहरू। म थोरै डराएँ - तिनीहरू धेरै जिज्ञासु, जानकार र संलग्न थिए (वास्तवमै तीव्र दिमाग!)। मैले यी मान्छेहरूलाई कहिले पनि भेट्ने थिएन यदि यो ब्लगिंगको लागि नभएको भए।
मैले ब्लग गर्न शुरू गरें। त्यसपछि मैले प्याट कोयललाई ब्लगमा सहयोग गरे। हामी सबै मिलेर इन्डियानापोलिसका लागि खुला ब्लग सुरु गर्‍यौं किन उनीहरूले शहरलाई माया गर्थे भन्ने बारेमा तिनीहरूको कथा सुनाउन। प्याटले अध्यक्ष र सीईओ रोन ब्रुम्बर्गरलाई भेटे Bitwise समाधानहरू र मेरो ब्लगि discussedको बारेमा छलफल गरें। टेक्नोलोजीको बारेमा छलफल गर्न रोनले शार्प माइन्ड्सको टाउको टेक्यो र कर्पोरेट ब्लगि them उनीहरूका लागि छलफल गर्न एक उत्तम विषय हुनेछ भन्ने सोच्दछन्। त्यसोभए रोन र प्याटले मसँग खाजा खाए र हामीले यसलाई सेट अप गर्यौं।
सबै ब्लगिंग बाट।
त्यहाँ उपस्थित सबैका लागि अवसरहरू थिए र उनीहरूका धेरैजसो आँखा ज्योति भए। केहीले नोटहरूको पृष्ठहरू लेखे। मैले हेडिंग हेडहरू देखेँ (सायद बोरडमबाट एक 😉 - सबैजना मेरो जस्तो ब्लगिंगको बारेमा उत्साहित हुँदैनन्)। यो एक राम्रो अवसर थियो र मानिसहरुको एक शानदार समूहसँग यस टेक्नोलोजीसँग छलफल गर्नका लागि।
धेरै कुराकानी कम्पनीहरूको डरको वरिपरि केन्द्रित थियो कि त्यो कदम चाल्छ - यो एक ठूलो हो। कुनै पनि प्रमुख पहल जस्तै, ब्लगिging को लागी एक रणनीति र निगम भित्र केहि दिशानिर्देश आवश्यक छ। ठीक भयो, तपाईं आफ्नो कम्पनी र आफैलाई अगाडि बढ्नुहुनेछ तपाईंको उद्योगमा सोच्ने नेताको रूपमा, तपाईंको उत्पादन वरिपरि कुराकानीमा माइक्रोफोनको पहिलो हुनुहुनेछ, र तपाईंको ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउँनुहुनेछ।
मलाई लाग्छ हामीले प्राप्त गरेका वास्तविकताको एउटा भनेको कम्पनीहरूले उनीहरूलाई डरले धकेल्नु भन्दा नयाँ प्रविधि अपनाउनु पर्छ र ग्रहण गर्नु पर्छ। एउटा उदाहरण थियो केन्ट स्टेटको प्रतिबन्ध उनके एथलीटहरु को फेसबुक मा पोस्ट। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि प्रशासकहरूलाई अवसर थियो प्रोत्साहन र अनुगमन यसको सट्टा फेसबुकमा खेलाडीहरूको कार्यहरू। के यो एक शानदार भर्ती संसाधन हुने छैन? मलाई त्यस्तै लाग्छ।
जब मैले बल स्टेटका प्राध्यापकसँग कुरा गरें, मैले सोचें कि इन्टरनेटमा फ्रेशम्यान ब्लगहरू, कलेज जीवनको बारेमा उच्च माध्यमिक विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिँदै, घरबाट टाढा रहन, र स्वतन्त्रता र कलेजको अनुभवहरू देख्नु कत्ति अचम्मको हुनेछ। त्यो एक शक्तिशाली ब्लग हो!
साथै, मेरो ब्लगिंग मलाई मा अवतरण भयो इंडियाना मानवता परिषद आज राती जहाँ मैले रोजेर विलियम्सलाई भेटें, राष्ट्रपति आपतकालिन नेतृत्व संस्थान। रोजरले सामाजिक नेटवर्कको उपयोग यस क्षेत्रका युवा नेताहरूको समुदायहरू समन्वय गर्न र निर्माण गर्न गर्दछ। वाह!
मैले त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई पनि भेटें बेघर वेटरन र परिवारलाई सहयोग गर्दै, एक अविश्वसनीय संगठन जसले घरबारविहीन दिग्गजहरूलाई उनीहरूको खुट्टामा पछाडि फर्काउन परामर्श र हेरचाहको दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू मद्दत गर्दछ। उनीहरूसँग हाल उनीहरूको कार्यक्रममा १less० घरबारहित भेस छन्, तिनीहरूलाई खाना, आश्रय, रोजगार स्थान इत्यादि प्रदान गर्दै।
यी गैर-नाफामुखीहरूको जोश अचम्मको थियो र म प्रोत्साहित भए कि सबैले कसरी प्रविधिमा अवसरहरू देखे। त्यहाँ दुई समूह बीच एक निश्चित dicotomy थियो। बिहान समूहको सफल व्यवसायहरू थिए जुन नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा उत्सुक थिए र हुनसक्छ यो नयाँ चुनौतिहरूले के ल्याउँला भन्ने बारे अलिक चिन्तित छ। साँझको समूह अर्को टेक्नोलोजीको लागि भोकाएको थियो जसले तिनीहरूलाई अन्य व्यक्तिसँग छिटो र अधिक प्रभावकारी रूपमा जडान गर्दछ।
मलाई लाग्छ जब तपाइँको व्यवसाय Vet बचाउन को लागी वा भोकाएको को लागी अर्को खाना खोज्न को लागी, कुनै पनि टेक्नोलोजी राम्रो छ।
टैग: बिटवाइज समाधानहरूब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिआपत्कालीन नेतृत्वबेघर दिग्गजहरुइंडियानापोलिसकेन्ट राज्यप्याट कोयलतीखो दिमाग
तपाईको ब्लगको बारेमा कसैले पनि मतलब गर्दैन!